စောချစ်သူ: System Speed ကိုမြန်ဆန်စေရန်
System Speed ကိုမြန်ဆန်စေရန်
System Speed ကိုမြန်ဆန်စေရန်အတွက် လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အချက်များ
ကွန်ပျူတာ System Speed ကိုမြန်ဆန်စွာအသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်-
၁။ ကွန်ပျူတာတွင် Application တစ်ခုကိုအသုံးပြုပြီးတိုင်း Desktop ပေါ်တွင် Right Click ဖြင့် Refresh ပြုလုပ်ပေးရပါမည်။ Refresh ပြုလုပ်ပေးခြင်းအားဖြင့် RAM အတွင်းမလိုအပ်သည့် File များကိုဖယ်ထုတ်ပေးနိုင်ပြီး System Speed ကိုမြန်ဆန် စေပါသည်။
၂။ File Size ကြီးမားသောပုံများကိ Wallpaper အဖြစ်အသုံးမပြုသင့်ပါ။ Wallpaper ကို File Size ကြီးမားသောပုံကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် RAM ၏လုပ်ဆောင်မှုကို နှေးကွေးစေပါသည်။
၃။ Desktop ပေါ်တွင် Shortcuts များကိုထားရှိပြီး အသုံးပြုခြင်းမှရှောင်ကျဉ်ရပါမည်။ Desktop ပေါ်ရှိ Shortcuts တစ်ခုသည် RAM အတွင်း ၌ ၅၀၀ Bytes နေရာယူအသုံးပြု စေပါသည်။
၄။ Recycle Bin ကိုနေ့တိုင်း Empty ဖြစ်စေရန်ရှင်းလင်းပေးရပါမည်။ Recycle Bin ကို Empty မပြုလုပ်သေးသမျှ မိမိ Delete လုပ်လိုက် သည့် File များသည် Hard Drive တွင်နေရာယူနေပါသည်။ Delete လုပ်ရန်သေချာသည့် File များကို Shift + Delete ဖြင့် Recycle Bin အ တွင်းမရောက်စေပဲ တိုက်ရိုက် Delete လုပ်နိုင်ပါသည်။
၅။ Temporary Internet File များကို ပုံမှန် Delete ပြုလုပ်ပေးရပါမည်။
၆။ Defragment ပြုလုပ်ခြင်းကို ၇ ရက်လျင်တစ်ကြိမ်ခန့်ပြုလုပ်ပေးရပါမည်။ Defragment ပြုလုပ်ပေးခြင်းအားဖြင့် Hard Drive အတွင်း Free Space ကိုတိုးမြင့်လာစေပြီး File များကိုပြန်စီပေးသည့်အတွက် ကွန်ပျူတာကိုအသုံးပြုရာတွင် ပိုမိုမြန်ဆန်စေပါသည်။
၇။ ကွန်ပျူတာတွင် Partition ကိုအနည်းဆုံးနှစ်ခုထား၍ အသုံးပြုသင့်ပါသည်။ File Size ကြီးမားစွာအသုံးပြုရမည့် Photoshop၊ 3DS Max ကဲ့သို့သော Software များကို Run ၍အသုံးပြုသည့်အခါတွင် Window တင်ထားသည့် Partition ကိုအသုံးမပြုပဲ၊ ဒုတိယ Partition တွင် Run ၍အသုံးပြုရပါမည်။ Window တင်ထားသည့် Partition တွင် Data များထားရှိခြင်း၊ Software များ Run ၍အသုံးပြုခြင်းများကို တက် နိုင်သမျှရှောင်ကျဉ်၍ Free space များစေရန်ဆောင်ရွက်ရပါမည်။ Window တင်ထားသည့် Partition တွင် Free space နည်းနေပါက ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်မှုကိုနှေးကွေးစေပါသည်။
၈။ Software တစ်ခုကိုအသုံးပြုရန်အတွက် Run ပြီးပါက Tray Icon များထားရှိ အသုံးပြုခြင်းကို မပြုလုပ်သင့်ပါ။ ထို Tray Icon များထားရှိ အသုံးပြုခြင်းသည် RAM ကို ပိုမိုအလုပ်လုပ်စေပြီး ကွန်ပျူတာ System ကိုနှေးကွေးစေနိုင်ပါသည်။
၉။ Software များကို ကွန်ပျူတာစဖွင့်သည်နှင့်တပြိုင်နက်တည်း Automatically အလုပ် လုပ်စေခြင်းမပြုလုပ်သင့်ပါ။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်အတွက် Run တွင် msconfig ဟုတ်ရိုက်ပြီး Startup Tab တွင် Disable All ကို Click ပြုလုပ်၍ ကွန်ပျူတာကို Restart ပေးရပါမည်။
Disable start program
၁၀။ ကွန်ပျူတာတွင်း ဖုန်များဝင်ရောက်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးရပါမည်။ ဖုန်များသည် ကွန်ပျူတာ Cooling Fan ကိုနှေးကွေးလာစေကာကွန်ပျူတာ CPU ကိုတဖြည်းဖြည်းချင်း ပူလာစေပါသည်။ ထိုသို့ပူလာသည်နှင့်အမျှ ကွန်ပျူတာ၏ ပုံမှန်စနစ်တကျလုပ်ဆောငမှုများကို ထိခိုက်လာစေကာ System Speed ကိုနှေးကွေးလေးလံလာစေနိုင်ပါသည်။
၁၁။ ကွန်ပျူတာ CPU အတွင်းရှိဖုန်များကိုဖယ်ရှားရန်အတွက် ဖုန်စုပ်စက်များကို လုံးဝအသုံးမပြုရပါ။ နူးညံ့သောအ၀တ်စများ၊ ကွန်ပျူတာဖုန်သုတ် သည့် အ၀တ်စများကိုသာ အသုံးပြုရပါမည်။
၁၁။ ကွန်ပျူတာကို System Restore Function ကိုဖွင့်ထားခြင်းသည် CPU ၏ စွမ်းဆောင်မှု ကိုအသုံးပြုမှုများပြားစေပါသည်။ ထို့ကြောင့် System Restore ကိုပိတ်ထားသင့်ပါသည်။ System Restore ကိုပိတ်ထားရန်အတွက် My Computer \_ Properties သို့ဝင်ရောက်၍ ၄င်းမှ System Restore Tab သို့ဝင်ရောက်ကာ အောက်ဖော်ပြပါပုံအတိုင်း Turn off system restore on all drives ကို Select လုပ်၍ ပိတ်ထားနိုင်ပါသည်။
၁၂။ Search Indexing ကို Disable ပြုလုပ်ထားခြင်းသည် ကွန်ပျူတာ System Speed ကို မြန်ဆန်စေပါသည်။ Search Function ကိုပိတ်ထားရန်အတွက် My Computer မှ Window တင်ထားသည် C Drive ကို Right Click နှိပ်၍ Properties သို့ဝင်ရောက်ရပါမည်။ ထို့နောက် အောက်ဖော်ပြပါပုံအတိုင်း Allow indexing Services to index this disk ကို uncheck ပေး၍ Apply ပေးရပါမည်။
၁၃။ Error Checking Utility ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ကွန်ပျူတာ System Speed ကိုမြန်ဆန်စေပါသည်။ Error Checking Utility ကိုအသုံးပြုရန်အတွက် ကွန်ပျူတာအတွင်းဖွင့်ထားသော File များကိုပိတ်ရပါမည်။ My Computer မှ Drive တစ်ခုကို Right Click နှိပ်၍ Properties သို့ဝင်ရောက်ရပါမည်။ ထို့နောက် Tools Tab သို့ဝင်၍ အောက်ဖော်ပြပါပုံအတိုင်း Check now ကို Click ၍ Scan for and attempt recovery of bad sectors ကို Check ပေး၍ Start ကို နှိပ်ရပါမည်။
၁၄။ ကွန်ပျူတာအတွင်းရှိ Spyware များသည် ကွန်ပျူတာသုံးစွဲသူ၏ Personal Data များကို ခွင့်ပြုချက်မရှိပဲခိုးယူရုံသာမက ကွန်ပျူတာသုံးစွဲရာတွင် ကွန်ပျူတာကိုနှောင့်နှေးစေပြီး မကြာခဏရပ်တန့် စေခြင်းခြင်းများကိုပါဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကွန်ပျူတာအတွင်းရှိ Spyware များကိုရှင်းလင်းပေးရပါမည်။ Antivirus Software ကိုအသုံးပြုခြင်းမရှိသေးပါက Online Free Service တစ်ခုဖြစ်သော http://onecare.live.com/ သို့ဝင်ရောက်၍ ကွန်ပျူ တာ ကိုစစ်ဆေးခြင်းဖြင့် Virus များကိုဖယ်ရှားနိုင်ပါသည်။
၁၅။ Window တင်ရာတွင် NTFS အမျိုးအစား File Type ကိုအသုံးပြုရပါမည်။ FAT32 ကို အသုံးမပြုရပါ။ မိမိအသုံးပြုနေသည့် Window တွင်မည်သည့်အမျိုးအစားကိုအသုံးပြုထား သည်ကို သံသယဖြစ်ပါက Window တင်ထားသည့် C Drive ကို Right Click ဖြင့်နှိပ်၍ Properties သို့ဝင်ရောက်၍ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ FAT32 ဖြစ်နေပါက NTFS File Type သို့ပြောင်းလဲပေးရပါမည်။ ထိုသို့ပြောင်းလဲရန်အတွက် ပထမဆုံးအရေးကြီးသည့် Data များကို Back Up ပြုလုပ်ထားရပါမည်။ ထို့နောက် Start \_ Run တွင် CMD ဟုရိုက်နှိပ်၍ Prompt တွင် CONVERT C: /FS:NTFS ဟုရေး၍ Enter ပေးရပါမည်။ ထို့နောက် ခေတ္တ စောင့်ပေးရပါမည်။ NTFS ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် Security မြင့်မားခြင်း၊ Folder ပမာဏကို ကြီးမားစွာအသုံးပြုနိုင်ခြင်းနှင့် Computer System Speed ကိုမြန်ဆန်စွာအသုံးပြုနိုင်ခြင်းနှင့် အခြားအကျိုးရလဒ်များကို ရရှိစေပါသည်။
check file type
၁၆။ ကွန်ပျူတာကို တစ်လလျင်အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်ခန့် Disk Cleanup ပြုလုပ်ပေးသင့်ပါ သည်။ Disk Cleanup ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် Temporary Files များကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်ပြီး ကွန်ပျူတာ System Speed ကိုမြန်ဆန်စေပါသည်။ C Drive ကို Right Click ဖြင့်နှိပ်၍ Properties သို့ဝင်ရောက်ပြီး Disk Cleanup Bottom ကိုနှိပ်၍ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
၁၇။ ကွန်ပျူတာအတွင်းမလိုအပ်သည့် Program များကိုဖယ်ရှားပေးရပါမည်။ ဖယ်ရှားရာတွင် Window တွင်ပါရှိသည့် Add or Remove Program မှတစ်ဆင့်ဖယ်ရှားနိုင်သကဲ့သို့ Your Uninstaller ကဲ့သို့ Uninstaller တစ်မျိုးမျိုးကိုအသုံးပြု၍ဖယ်ရှားနိုင်ပါသည်။ Software ကို အသုံးပြု၍ဖယ်ရှားပါက Add or Remove Program ကိုအသုံးပြု၍ဖယ်ရှား၍ ပျက်သွားခြင်း မရှိသည့် Registry အတွင်းရှိ File များကိုပါ ဖယ်ရှားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Source : ချယ်ရီမြေ
Posted by minchitthu at 23:58
Ashampoo Slideshow Studio HD2(1)
Copy ရအောင်ကူးနည်း (1)
CyberLink PowerDirector 10 (1)
DiskInfo v3.6.4 (2)
DVD Creator Portable (1)
Error Repair (1)
Flash Song ပြုလုပ်နည်း (2)
iPod တွေကို jailbreak လုပ်စရာမလိုပဲ website တွေကို မြန်မာစာပေါ်အောင် (1)
Maxthon browser (1)
Mcrosoft Office 2010 (3)
Myanmar App Market for Android (1)
Personalization Panel (1)
Registry Booster (2)
Samsung Galaxy Ace / W / Y / Note တွင် Root လုပ်စရာမလိုပဲ မြန်မာဖောင့် ထည့်နည်း (1)
scientific calculator (Android OS) (1)
Screen Saver (1)
Shut down မြန်အောင် (1)
software တွေကို License version ဖြစ်အောင် လုပ်နည်းများ - ညီနေမင်း(နည်းပညာ) (1)
System Mechanic (1)
Task Manager ကိုခေါ်လို့မရတော့ဘူးဆိုရင် (1)
Windows Media Player Error (1)
Zawgyi Keyboard Installer for Windows7(64-bit) (1)
မြန်မာပြက္ခဒိန် for Android (1)
အကြမ်းဖက်ဝါဒမှန်သမျှ ဆန့်ကျင်ဖယ်ရှားရေးနဲ့ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုင်ရာ ပြည်သူလူထု ပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်မှု
ရုပျရှငျ ပွနျရိုကျတော့မယျ့ သရုပျဆောငျ ရဲတိုကျ
ဆွေမျိုးပေါက်ဖေါ် တကယ်စစ်၏ မစစ်၏
ဖားအံမြို့မ ဘောလုံးကွင်းကို သာသနာ့ဗိမ္မာန် တည်ဆောက်ရေး နေရာအဖြစ် လှူဒါန်းရန် မဆုံးဖြတ်ရသေး
Folder Lock 7
ရိုးရာလေး - ပြည်တွင်း
သင့်ကလေးရဲ့ တစ်ကိုယ်ရည် လုံခြုံရေးအတွက် သူတို့လေးတွေကို ဘာတွေ ဘယ်လို သင်ပေးမလဲ
1. Kyaw Lwin
လင်ဍာမုက်(Happy Land) ~ Shee Shee
MRTV-4 : RSS Feed
Anti Virus Softwere များ
Ad -Aware Free Anti Virus
Avast Free Anti Virus
AVG Free 2012 Edition
Avira Free Edition
Malbytes Anti Malware
Miscrosoft Security Ess.
Advance System Care 5
Zawkabin Karen Font
Zawgyi Keyboard 32 bit
Zawgyi Keyboard Version3 32 bit
Zawgyi Keyboard 64 bit
KP Font (MM & Karen)
G-talk မှာ သူပြောတာကြားရပြီး ကိုယ်ပြန်ပြောတာသူမကြာ...
iphone ipad တွေမှာ Apps & Game တွေသွင်းဖို့လွယ်တဲ့...
Battery doubler for Laptop
Download Minus အဆင်ပြေကြပါစေ။
Planet Myanmar Mobile Dictionary for Android OS
Window Shut down မြန်အောင်
မြန်မာပြက္ခဒိန် MM Calendar for Android
ThinkFree Office Mobile v4.2.120417 for Android (f...
Real scientific calculator (Android OS)
Nero ဆော့ဝဲလ် မရှိသူများအတွက် DVD Creator Portable...
IObit Security 360 PRO v1.61
လက်ကွက်လေ့ကျင့်ရန်ဆော့ဝဲ Mavis Beacon Teaches Typing Download Here
Windows7တင်နည်း - နေမင်းမောင်
Source : နေမင်းမောင် ၁.Windows မတင်ခင်ဘာတွေလုပ်သင့်လဲ ? ၂.Windows တစ်ခုကိုဘယ်လို Install လုပ်မလဲ ? ၃.Windows တင်ပြီးရင်ဘာတွေလုပ်သင့်လဲ ? ...
ပိဋကတ်(၃)ပုံမြန်မာပြန် - ဒေါင်းလုတ်ယူပြီး Adobe Reader XI ဖြင့်ဖတ်ရန်။ by Saw Ehlor Adobe Reader XI ကို ဒီမှာဒေါင်းလုတ် ယူပြီးဖတ်ပါ။ ...
PDF ကနေ Word ပြောင်းချင်သူတွေအတွက်ပါ။လင့်မသေခင်ယူထားပါခင်ဗျာ...
ရွှေရိုး ( အင်္ဂလိပ် - မြန်မာ - အင်္ဂလိပ် အသံထွက်အဘိဓာန်)
...Download... ...ဒေါင်းရန်... မှတ်ချက် - Install လုပ်ပြီးရင် Restart လုပ်ပေးပါ။ အဆင်ပြေကြပါစေ။
Chrome နဲ့ Firefox ထက်၅ဆပိုမြန်သော Maxthon
Maxthon browser ကို install လုပ်ပြီးလျှင်အောက်ပါပုံအတိုင်းညာဖက်ထောင့်အပေါ်မှာအနီရောင်ဝိုင်းပြထားတာကိုကလစ်လိုက်ပါ။Setting ကိုသွား၊Advanced...
Ashampoo Slideshow Studio HD 2